Wararka Maanta: Axad, Sept 30, 2012-Dibadbax lagu taageerayo Guulaha Ciidamada Dowlada iyo kuwa Kenya ay ka gaareen dagaalka Kismaayo oo Muqdisho ka dhacay
Dibadbaxan oo qabashadiisa ay iska kaashadeen hay'adda CCD, maamulka degmada Wardhiigley iyo ayaa ururrada haweenka degmadaas ayaa waxaa ka qaybgalay dadweynaha qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir.
Wasiirka arrimaha gudaha, guddoomiyaha gobolka Banaadir, guddoomiyaha degmada Wardhiigley iyo guddoomiyaha haweenka degmada Wardhiigley, ku xigeenka safiirka Jabuuti iyo madax kale ayaa khudbado kala duwan ka jeediyay dibadbaxa iyagoo ka hadlay guulaha ciidamadu ka gaareen dagaalka Kismaayo.
"Guulaha Kismaayo laga gaaray waxay astaan u tahay soo afjaridda Al-shabaab iyo dhagartoodii diin ka been sheegidda ahayd," ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya,Cabdisamad Macallim Maxamuud intaasi raaciyay inay jiraan daldaloollo ay suurogal tahay inay kooxahani uga faa'iideystaan wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ku booriyay inay ka hortagaan.
Sidoo kale; guddoomiyaha gobolka Banaadir, Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) ayaa khudbad dhinacyo badan halkaasi ka jeediyay, isagoo hoosta ka xariiqay in kooxda Al-shabaab mar haddii Kismaayo ay isaga baxeen ay kusoo laabanayaan magaalada Muqdisho si ay dib uga bilaabaan falalkoodii guracnaa.
Sidoo kale, Tarsan wuxuu xusay in dagaalyahannadii Al-shabaab ee Kismaayo laga ka baxay ay Muqdisho ku dhuumaanayaan, wuxuuna sheegay in shacabka Muqdisho ay soo sheegaan kooxaha dhuumaaleysanaya, isagoo u ballanqaaday qofkii soo sheega Al-Shabaab damacsan inuu fal geysto oo arrintaasina run ay noqoto la siin doono lacag dhan $2000 (Laba Kun Dollar).
Maxamed Cali Jaamac oo ah ku xigeenka safiirka Jabuuri ayaa sheegay in Jabuuti ay ka go'an tahay inay garab istaagaan walaalahooda Soomaaliyeed, wuxuuna intaas ku daray in ciidamadooda jooga magaalada Baladweyne ay caawiyeen.
Xubnihii ka hadlay dibadbaxa waxaa ka mid ahaa: guddoomiyaha degmada Wardhiigley, Deeqo C/qaadir Axmed, guddoomiyaha haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Maxamed Baarqab, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Maxamed Yuusuf, kuwaasoo dhammaantood xusay in si wadajir ah looga hortago kooxaha doonaya inay dhibaatooyinka ka sameeyaan Muqdisho.